Ampidino Anaconda 2018.12 ho an'ny Windows
Sehatra: Windows Version: 2018.12 Fiteny: English
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (614.30 MB)
Ampidino Anaconda, Anaconda Navigator miaraka aminireo fitaovana ilaina rehetra ho anireo izay maniry hampivelatra ny Python aminny Windows. Fitsinjarana Anaconda; Izy io dia misy ny fitaovana fampivoarana rehetra izay hanamora anao aminny fampiroboroboana ny rafi-pianarana milina miaraka aminny python. Rindrambaiko matihanina toa ani Jupyter, Jupyterlab, Spyder ary RStudio.
Ny sasany aminireo fitaovana fanaovana informatika sy siantifika dia Numpy, SciPy, Numba, pandas ary Dask. Izy io dia misy ny TensorFlow, H2o.ai ary theano avy aminny algorithma fianarana milina rehefa nametraka azy ireo ianao. Izy io dia rindrambaiko tokana mamela anao hamolavola haingana sy hizaha rindrambaiko Python ao aminny solo-sainao Windows rafitra aminny fenitra indostrialy.Azonao atao ny mamolavola haingana ny fianarana milina, ny fianarana lalina ary ny fitrandrahana angon-drakitra, izay faritra ambaninny faharanitan-tsaina voatrolombelona, ​​miaraka amini Anaconda.
Ankoatrizay, azonao atao ny miditra aminny rindrambaiko mifandraika aminny siansa 1400 miaraka aminny mpitantana fonosana Conda ao aminilay rindrambaiko. Anaconda Navigator koa dia loharano misokatra sy rindrambaiko malalaka.
Haben'ny rakitra: 614.30 MB